OTU ESI EHICHA KUKI NA INTERNET EXPLORER - INTERNET EXPLORER - 2019
Esi kpochapụ kuki na nchọgharị Internet Explorer
Kuki bụ setịpụ data pụrụ iche nke a na-ebute na nchọgharị eji site na saịtị eleta. Njirimara ndị a nwere ozi nwere ntọala na data onwe onye nke onye ọrụ ahụ, dịka aha njirimara na paswọọdụ. A na-ehichapụ ụfọdụ kuki na-akpaghị aka mgbe ị mechiri nchọgharị ahụ, ndị ọzọ ga-ehichapụ onwe gị.
A ghaghị idozi faịlụ ndị a kwa oge, n'ihi na ha na-akwagharị na draịvụ ike ma nwee ike ime ka nsogbu banye na saịtị ahụ. Na ihe nchọgharị niile, a na-ehichapụ kuki na ụzọ dị iche iche. Taa, anyị na-ele anya iji mee nke a na Internet Explorer.
Otu esi ehichapụ kuki na Internet Explorer
Mgbe ị mepechara ihe nchọgharị, gaa "Ọrụ"nke dị n'akụkụ aka nri n'elu.
N'ebe ahụ, anyị ahọrọ ihe "Njirimara Nchọgharị".
Na ngalaba "Nchọgharị Nchọgharị"eme ememe "Hichapụ log log na ụzọ". Push "Hichapụ".
Na windo ọzọ, hapụ otu akọrọ na-abụghị "Kuki na Data Weebụ". Anyị pịa "Hichapụ".
Site n'iji ụzọ dị mfe, anyị kpochapụrụ kuki na ihe nchọgharị. Enwere ike ibibi ozi gbasara anyị na ntọala anyị niile.